ओली सरकारले जाँदा–जाँदै बढायो गाडी भाडा ! कति बढ्यो त ? – Ap Nepal
काठमाण्डाै – सरकारले लामो दुरीका सार्वजनिक गाडीको भाडा दर बढाएको छ । यातातात व्यवस्था विभागले आज बुधवार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार लामो दुरीमा चल्ने गाडीमा २८ प्रतिशत भाडा बढाइएको छ ।
भाडा बढाउनका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गएको आइतवार अर्थात् असार २७ गते नै विभागलाई सहमति दिएको थियो । विभागले हिजो मङ्गलवार २९ गतेदेखि नै नयाँ भाडा दर लागू भएको जनाएको छ ।
नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक बसको भाडा २८ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै पहाडमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा २० प्रतिशत र तराईमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा २६ प्रतिशतले बढेको छ । बढेको भाडादर दुई वा दुईभन्दा धेरै प्रदेश भएर चल्ने लामो दुरीका गाडीमा लागू हुनेछ । प्रदेशभित्र चल्ने गाडीको भाडा प्रदेश सरकारले नै तोक्ने अधिकार पाएको छ ।
भाडा बढाउँदा इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई ३५ र अन्य सूचकलाई ६५ प्रतिशत आधार मान्ने गरिएको छ । २०७५ सालको असोजमा बढाएयता भाडा समायोजन नगरिएको र योबीचमा इन्धन तथा अन्य पाटपुर्जाको समेत मूल्य धेरै नै बढेकाले यस पटक गाडी भाडा पनि बढाइएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभएको छ । उज्यलोअनलाईनबाट।
Prevओलीलाई नेता कार्यकर्ताले बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म सयौं मोटरसाइकल र गाडीले स्कर्टिङ र स्वागत गरे..
Nextयो भिडियो हेरेपछी कस्को मन नरोला? आफ्नै आमाले छोरोलाई पशु सरह साङ्लोले बाधेर राख्छिन् ,कारण यस्तो ,आमाको रु’वाबासि (भिडियो सहित )
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल मंसिर १५ गते सोमबार इश्वी सन २०२० नोभेम्वर ३० तारीख